Delta FC Fan Member Forum :: Computer Field :: Internet Znoe
Admin on Wed Feb 24, 2010 9:04 am
February ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၁၀ မှာ Google ကနေ buzz ကို စတင်ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ် ။
မိမိရဲ့ gmail ကို ဖွင့်လိုက်ရင် buzz ကိုမြင်ရမှာပါ ။ buzz အဲ့ဒါလေးကို သုံးကြည့်ပါ ။ အရမ်းကို မိုက်ပါတယ် ။
သုံးလို့လည်း အရမ်းကောင်းပါတယ် ။ Facebook လိုမျိုးပါဘဲ ။ game တော့ မပါသေးဘူး ။
မန်ဘာများအနေဖြင့် စမ်းပြီးသုံးကြည့်ပါ အရမ်းကိုကောင်းမွန်လို့ သတင်းပေးရတာပါ ။
samurai on Wed Feb 24, 2010 9:08 am
ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတဲ့အချိန်တွေမှာ မေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် ။ ဖွင့်လို့ကလည်းမရဘူး ၊ proxy လည်း ကျော်ပြီးမေးလည်းဖွင့်လို့မရဘူး ။
အဲ့လိုမျိုးအချိန်အနေတွေမှာဆိုရင် u95 software လေးကိုသုံးပြီးကျော်ကြည့်ပါ ။ u95 ကိုကလစ်ပေးပြီးဖွင့်လိုက်ပါ ။ ပြီးရင် Option ထဲကို
၀င်ပါ ။ ပြီးရင် proxy Settings ထဲကိုဝင်ပါ ။ အဲ့ထဲကိုရောက်သွားရင် Manual Proxy Setting ကိုရွေးပါ ။
proxy host မှာ 203.81.80 proxy port မှာ 80 ပြောင်းလိုက်ပါ ။ အဲ့ဒါဆိုရင် mail ကိုဖွင့်လို့မရတဲ့ မန်ဘာတွေ mail ကိုဖွင့်ပြီး
အရေးကြီးတဲ့ စာတွေကိုဖတ်လို့ရပါပြီ ။
samurai on Wed Feb 24, 2010 9:10 am
Google Buzz ၌ ပြောင်းလဲမှုအချို့ ပြုလုပ်
Google Buzz ဟာ Gmail ၀န်ဆောင်မှုနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ social-networking application ဖြစ်ပြီးaddress ရှိဆက်သွယ်မှုများဖြင့်
Facevook နဲ့ Twitter ကဲ့သို့ ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် ဖန်တီးပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ Buzzရဲ့ default mode ဟာဆက်သွယ်မှုများကို
အလိုအလျောက် follow ပြုလုပ်ပေးတာကြောင့် user များမှ ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုများကို ခံနေရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် Google ဟာ follower
တွေအတွက် hide option ကိုထည့်သွင်းပေးခဲ့ပြီး follow မလုပ်လိုသည့် user တွေအတွက်လည်း edit profile စာမျက်နှာမှာ
ပြင်ဆင်နိုင်မယ့်အချက်တွေကို ထည့်သွင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ် ။ နောက်ပြီး Buzz user တွေအနေနဲ့ Buzz ကို hide လုပ်ခြင်း ၊
ပိတ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်စေရန်အတွက် " Setting " tab တွင်ပြုလုပ်နိုင်စေမည့် အချက်ကို ထပ်မံထည့်သွင်းပေးခဲ့ပြီး Gmail
စာမျက်နှာရဲ့အောက်ခြေတွင် Buzz tab ကိုထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါသည် ။ ကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကို သူများတွေမမြင်
kokophone on Wed Feb 24, 2010 10:13 am
software များကို တွေ့ကရာ ဆိုက်တွေကနေ Download မလုပ်မိဖို့နှင့် install မလုပ်မိကြဖို့ပါ . ကျွန်တော်တို့ နည်းပညာစတင်လေ့လာ သူများအနေဖြင့်
မ၀င်ရောက်သင့် Download မလုပ်သင့်သော နေရာများ အများအပြား ရှိသည့်အနက် လတ်တလော တစ်ကယ့်ကို software များကို မက်မက်မောမောနှင့်
Download လုပ်ချင်စဖွယ် ဖြစ်အောင် တင်ပေးထားသည့် ၀ဘ်ဆိုက် စာရင်းကို ကျွန်တော် ရေးပေးပါ့မယ် . ထပ်မံပြီး သတိပေးလိုက်ပါသည် . လုံးဝ(လုံးဝ)
Download မလုပ်မိပါစေနှင့်၊ အဆိုပါ ၀ဘ်ဆိုက်မှာ link များကို ကူးယူပြီး ပို့စ်တင်ထားသူများ ရှိပါက ဖျက်ပေးစေလိုပါသည်။ မိမိကွန်ပျူတာအတွက်
ကောင်းကျိုးမရှိဘဲ ဆိုးကျိုးများသာ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ် . တစ်ချို့က မ၀င်နဲ့ မလုပ်နဲ့ဆိုလျှင် ပိုပြီး လုပ်ချင် စမ်းချင်ကြပါတယ် . ကျွန်တော်ပြောတာကို
မယုံကြည်သူများ စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ် . ဒါက လူတိုင်းသိသင့်တယ်ထင်လို့ ကျွန်တော် ပို့စ်အနေနဲ့ တမင်တင်ပေးလိုက်တာပါ . Google ကနေ ရှာလို့ရတယ်
ဆိုပေမယ့် ရှာတွေ့တဲ့ ဆိုက်တိုင်း Download မလုပ်သင့်ပါဘူး . မိမိရှာတဲ့ ဆိုက်ရဲ့ post (web စာမျက်နှာ) တိုင်းမှာ Download လုပ်တဲ့သူတွေရေးခဲ့တဲ့
comments ဆိုတာရှိပါတယ် . အဲ့ဒီ့ ဖိုင်ဟာ တစ်ကယ့်ကို အလုပ်လုပ်သလား . အစစ်အမှန်လား ဆိုတာကို ဆိုက်တွေရဲ့ comments တွေကို
ကြည့်တာနဲ့တင် သိနိုင်ပါတယ် . မရိုးသားတဲ့ ဆိုက်တွေမှာ comments ပေးဖို့အတွက် မထည့်ပေးထားပဲ . တမင်ဖြုတ်ပေးထားတတ်ပါတယ် . ဘာ့ကြောင့်
အဲ့လိုမျိုး ဆိုက်တွေရှိတာလဲ ဘာ့ကြောင့်လုပ်သလဲဆိုရင် အလွယ်ကူဆုံးနှင့် အဓိက ဦးတည်ချက်က အသုံးပြုသူရဲ့ Bank accout နှင့် အခြားသော
အချက်အလက်တွေကို ခိုးယူဖို့ပါ . အဓိကကတော့ ဘဏ်အကောင့်တွေပါပဲ . လူတိုင်းဟာ မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ (သို့) ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ internet
cafe တွေမှာဆိုရင် ဘဏ်အကောင့်ကို သုံးကြပါတယ် . ဥပမာ paypal ပေါ့ဗျာ ကျွန်တော့်မှာ paypal account ရှိတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်က online ကနေ
တစ်ခြားတစ်နိုင်ငံကို သွားမယ် . ဥပမာ မြန်မာနိုင်ငံဗျာ . မြန်မာနိုင်ငံကိုလာဖို့ Trader hotel မှာ booking လုပ်မယ် . အဲ့တော့ ထိုင်းအင်တာနက်
ဆိုင်ကနေ ပြီးတော့ paypal account ကို သုံးပြီး ပိုက်ဆံလှမ်းချေ လိုက်တယ် . ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ မပါလာလို့ လမ်းဘေး internet cafe ဆိုင်ကနေ
သုံးလိုက်ရတယ် ဆိုပါစို့။ အဲ့လို ရိုက်ပြီးသုံးလိုက်တာနဲ့ အဲ့ဒီ့ computer မှာ ကျွန်တော် သုံးခဲ့တဲ့ paypal ရဲ့ email address and password က
ကျန်ခဲ့ပြီ ဥပမာ " အဲ့ဒီ့ ဆိုင်မှာ keylogger (သို့) အဲ့ဒီ့ထက် မြင့်တဲ့ အဆင့်မြင့် အချက်အလက် သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ program" ကို Install
လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် . ကျွန်တော် သေပြီပေါ့ . ပင်ပင်ပန်းပန်း ရှာထားသမျှ ဘဏ်ထဲမှာ ရှိသမျှပိုက်ဆံ ကျွန်တော့်အကောင့်ကို သိတာနဲ့ ကုန်ပြီ. paypal မှာ က
အကောင့်ကိုသိရင် မိမိရဲ့ ဘဏ်အကောင့်ထဲကို ငွေလွှဲလို့ရတယ် . နောက်တစ်ခုက ငွေမလွှဲချင်ဘူးဆိုတာတောင်မှ Online ကနေ လျှောက်ပြီး ၀ယ်ပစ်မယ် .
online မှာ အခုဆိုရင် ပစ္စည်းမှန်သမျှကို online စနစ်ကနေ ပေးပြီး ၀ယ်လို့ရနေပါပြီ . ဆိုင်ကယ် ကား အကုန်လုံးမှာလို့ရတယ် . လိပ်စာတစ်ခုသာ ပေးလိုက်
. ငွေချေပြီးတာနဲ့ အဲ့ဒီ့နေရာကို ပစ္စည်းလာပို့ပေးတယ် . ကျွန်တော်ဆိုရင် တစ်ခါမှားဖူးတယ် . ကျွန်တော်တို့ဆီမှာက သီချင်းတွေကို တစ်ခါတစ်လေ website
ကနေ ၀ယ်တယ် . တစ်ခါ သီချင်းဆိုပြီးတော့ ၀ယ်လိုက်တာ သီချင်းကျမလာဘူး . ပိုက်ဆံကပေးလိုက်ပြီး . တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ DJ ကစားတဲ့
သီချင်းဓါတ်ပြားတစ်ချပ် အင်္ဂလန်ကနေ စာတိုက်ကနေတစ်ဆင့် ပို့လာတယ် . အဲ့တော့မှ သဘောပေါက်တယ် ကို ၀ယ်လိုက်တာ သီချင်းမဟုတ်ဘဲ
ဓါတ်ပြားပါလားလို့ . http://loweimages.com ဆိုက်ဟာဆိုရင် တစ်ကယ့်ကို တမင်တကာ အပင်ပန်းခံပြီး လုပ်ထားတယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ ထင်တယ် .
မြင်သမျှ program တွေကလဲ latest version ချည်းပဲ . မသိတဲ့သူအဖို့တော့ သွားရည်ယိုစရာချည်းပါပဲ .
Last edited by kokophone on Wed Feb 24, 2010 11:58 am; edited 1 time in total
G-Talk မှာ မိမိနာမည်မကျန်ခဲ့စေချင်ရင်
kokophone on Wed Feb 24, 2010 11:05 am
ကျွန်တော်တို. Gtalk သုံးတဲ့အခါမှာတော်များများကတော့အင်တာနက်ဆိုင်မှာသုံးတာများပါတယ်။
မိမိGtalk မ၀င်ခင် မိမိရဲ.ရှေကဘယ်သူတွေ Gtalk ၀င်သွားလဲ
သူတို.ရဲ. Gmail Addressတွေကဘာနာမည်လဲဆိုတာသိချင်ကြပါလိမ့်မယ်။
နောက်တခုက မိမိ Gtalk ၀င်ခဲ့ရင်လဲမိမိ Gmail Address ကိုသူများမသိအောင်ဘယ်လိုဖျက်မလဲဆိုတာတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။
သူများသိတော့ကိုယ့်ကို invite လုပ်မှာပေါ့။
ထို Folder ၅ခုမှ ဒုတိယမြောက် HKEY_CURRENT_USER ဘေးရှိ + ကိုနှိပ်ပါ။ List ကျလာပါလိမ့်မည်။
၆။ Google Talk ကိုရှာပါ။ တွေ.ပါက Google Talk ဘေးရှိ +ကိုနှိပ်ပါ။ List ကျလာပါလိမ့်မည်။
အကယ်လို.မိမိ Gtalk ၀င်ခဲ့ တယ်ဆိုရင်တော့မိမိGmail Addressနာမည် ပေါ်နေပါလိမ့်မည်။
kokophone on Wed Feb 24, 2010 11:53 am
(၁) မိမိမသိတဲ့မေးလ်ကို ဖွင့်ဖောက်မကြည့်မိပါစေနဲ့ . ဖွင့်ကြည့်မိသည့်တိုင်အောင် ဓါတ်ပုံနှင့် ပို့ပေးထားသည့် ဘာမှန်းမသိသည့် program ကို install
မလုပ်ပါနှင့် . မည်သည့် program ကိုမဆို rename ပြောင်းလို့ရပါတယ် .
(၃) firefox ကို သုံးပြီး email ၀င်တိုင်း remember this computer ကိုတာကို အမှန်ခြစ်မပေးမိပါစေနဲ့ . မိမိရဲ့ password ဟာ firefox browser
မှာ ကျန်ခဲ့သလား မကျန်ခဲ့သလား သိချင်ရင် Tools >> options >> security ကို သွားလိုက်ပါ . ပြီးလျှင် saved passwords ကို နှိပ်ပါ . ပေါ်လာတဲ့
box ထဲက show password ကို ဆက်နှိပ်လိုက်ပါ . အဲ့မှာ ကျန်နေခဲ့လျှင် remove all ကို နှိပ်ပြီး ရှင်းလင်းခဲ့နိုင်ပါတယ် . cookies တွေ ကျန်နေခဲ့မှာ
စိုးရင်တော့ ccleaner လို program မျိုးနဲ့ ရှင်းခဲ့လျှင် ပိုစိတ်ချနိုင်ပါသည် .
(၄) keylogger ကို ဖျက်ပစ်ပါ နောက်တစ်ခုက keylogger မဟုတ်ဘဲ တစ်ခြား မိမိလုပ်ဆောင်ချင်ကို မှတ်သားပေးနိုင်တဲ့ recorder တွေလဲ
(၅) နောက်တစ်ခုက flash drive တစ်ခုဆောင်ထားပြီး ဆိုင်က program တွေကို မသုံးပဲ လိုအပ်တဲ့ program တွေကို မိမိ flash drive ထဲမှာ
portable အဖြစ် ယူလာပြီးသုံးတာ ပိုအဆင်ပြေစေပါတယ် .
Internet Connextion ကို 20% မြန်အောင်လုပ်နည်း
kokophone on Wed Feb 24, 2010 12:08 pm
2. Type gpedit.msc ရိုက်ပါ။
4. ဘယ်ဘက်ခြမ်းက Computer Configuration ကို Expand လုပ်ပါ။
၅. Administrative Templates ကို Expand လုပ်ပါ။
၈. ပြီးလျှင် ညာဘက်ခြမ်းက Limit Reservable Bandwidth ဆိုတဲ့စာကြောင်းပေါ်မှာ double Click နှိပ်ပါ။
၉. Limit Reservable Bandwidth Properties box မှာ Enable option ကိုရွေးပါ။
၁၀. Bandwidth Limit [%] box မှာ 0% ကို 20 % ပြောင်းပြီး ok နှိပ်ထွက်ပါ။
ပရုပ်ဆီ ပရုပ်ဆီ အော်နေသူများအတွက်
kokophone on Wed Feb 24, 2010 12:24 pm
ကျွန်တော် proxy, port ထည့်ပုံထည့်နည်းနှင့် အသုံးပြုပုံ အသုံးပြုနည်းကို ရေးသွားပါ့မယ် . Dead proxy နှင့် Live proxy port များကို
အမြဲတမ်း လဲလှယ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . ဆိုက်ရဲ့ ညာဖက်မှာ ရှိပါတယ် . . proxy ကို ဘာ့ကြောင့် သုံးကြသလဲဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်တာတွေကို လေ့လာတဲ့အခါမှာ တစ်ချို့က မြန်မာပြည်ကနေ ပိတ်ထားသည့် ဆိုက်များ ဖြစ်နေသည်ဆိုပါစို့ .
ကျွန်တော်တို့ အနေဖြင့် မြန်မာပြည်က ပေးသုံးထားသည့် proxy နှင့် Port ကို သုံးမည်ဆိုပါက မြန်မာပြည်တွင် ပိတ်ထားသည့် ၀ဘ်ဆိုက်များကို ကြည့်လို့
မရပါဘူး . အဲ့ဒီ့တော့ ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် ကျော်ပြီး ကြည့်တဲ့ proxy ၀ဘ်ဆိုက်များကနေ တစ်ဆင့် ကျော်ကြည့်ရပါတယ် . အခု တော်တော်များများ proxy
website များဟာ ပိတ်ထားပြန်တော့ . မြန်မာပြည်က မပိတ်ထားသည့် proxy နှင့် port များကို ရှာကြံပြီး တင်ပေးထားပါတယ် . ကျွန်တော်က မြန်မာပြည်မှာ
မရှိသည့်အတွက်ကြောင့် အဆင်ပြေမပြေ ဆိုတာကိုတော့ စမ်းပြီးတော့ ထည့်ကြည့်လိုက်ပါ .
24.155.96.93	>>	8080
147.29.152.227	>>	8080
194.145.159.163	>>	8080
200.74.216.101	>>	80
Speedhost.com	>>	8080
ttcs.co.zw	>>	80
adsl-65-42-21-210.dsl.lgtpmi.ameritech.net	>>	8080
mail.icckenya.com	>>	8080
mail2.p3b-sumatera.co.id	>>	80
strancice-esinformatical.lam.cz	>>	80
Firefox တွင် proxy port ထည့်နည်း
•	Tools >> Options ကို သွားပါ .
•	Advanced ကို ရွေးလိုက်ပြီး Network က settings ကို နှိပ်ပါ .
•	manual proxy ကို ရွေးပါ .
•	အဲ့အကွက်ထဲမှာ HTTP proxy : ဆိုတဲ့ အကွက်နှင့် Port မှာ Live proxy ကို ဖြည့်ပေးပါ .
•	Ok ကို နှိပ်လိုက်ပါ . ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေပါပြီ .
kokophone on Wed Feb 24, 2010 12:33 pm
ကျွန်တော်တို့ ရွှေမြန်မာပြည်ကနေ youtube ဆိုက်ကို ကြည့်ခွင့်မပေးထားပါဘူး . ပိတ်ထားပါတယ် အဆင်ပြေမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ် . အခုပေးတဲ့
ဆိုက်ကိုတော့ မြန်မာပြည်က ပိတ်မထားရသေးဘူးလို့ သိရပါတယ် .. Msn, AIM, Yahoo နှင့် Gtalk တို့ကိုလဲ အဆင်ပြေပြေပဲ ၀င် Chat
လို့ရပါသေးတယ် .. ကဲ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ၀ဘ်ဆိုက်လိပ်စာနာမည်က https://polysolve.com ပါ .. အဆင်ပြေမယ်လို့လဲမျှော်လင့်ပါတယ် .
ပြီးတော့ အခုပို့စ်နှင့်အတူ ကျော်ဖို့၊ ခွဖို့အတွက် ၀ဘ်ဆိုက်လိပ်စာတွေလဲ ရေးပေးလိုက်ပါတယ် . သိသူများရှိသလို မသိသူများလဲရှိပါတယ် . အောက်မှာ
ယူလိုက်ပါ . ၀ဘ်ဆိုက် အသစ်တွေကိုပါ စာရင်းလုပ်ပြီး ထည့်ပေးထားပါတယ် .. Blog ရေးချင်သူများလဲ စမ်းသပ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ် .
ကျော်ခွလို့ရသည့် ၀ဘ်ဆိုက်များစာရင်း .
Vtunnel.biz	P-tunnel.com (new)
kokophone on Wed Feb 24, 2010 12:42 pm
ကျွန်တော် UltraSurf နဲ့ ကျော်လွှားနည်းကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ .
•	(၁) http://www.ultrareach.com/download_en.htm ကို သွားပါ ..
•	(၂) Download release version UltraSurf 9.5(.exe) ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပြီး နောက်ဆုံး update လုပ်ထားတဲ့ ultrasurf ကို Download ချလိုက်ပါ။
•	(၃) ဆိုက်ကိုဝင်မရသူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ .
•	(၄) Double click နှိပ်ပြီး Run လိုက်ပါ .
•	(၅) Home ၊ Retry ၊ Option ၊ Help ၊ Exit ရှိတဲ့အထဲက Option ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ .
•	(၆) ပေါ်လာတဲ့အထဲက Proxy Setting ကိုထပ်ရွေးပါ .
•	(၇) အခုပေါ်လာတဲ့ proxy box ထဲမှာ Auto Detect Proxy , Manual Proxy Setting , Directly use proxy ဆိုပြီးတော့ ၃ ခုရှိပါတယ် . အဲဒီ့အထဲက Manual Proxy Setting ကိုရွေးလိုက်ပါ .
•	(၈) ပြီးတော့ အခုလက်ရှိ ကိုသုံးနေတဲ့ စက်ရဲ့ Proxy Host နှင့် Proxy Port ကိုဖြည့်ပေးပြီး ok ကို နှိပ်လိုက်ပါ .
•	(၉) ပြီးတာနှင့် Ultrasurf ကို 10 စက္ကန့်လောက် ခဏပိတ်လိုက်ပြီး . ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ .
•	(၁၀) ပြီးတာနဲ့ ဖွင့်ပြီးတော့ သုံးလို့ရသွားပါပြီ .
•	(11) Gtalk မရသူများ Gtalk ရဲ့ connetction setting မှာ Proxy = 127.0.0.1 , port = 9666 ဆိုပြီး ဖြည့်ပါ။ ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ အသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီ .. proxy နဲ့ port တွေကိုတော့ သိအောင်လုပ်ထားပါ . မြန်မာပြည်ကလူအချင်းချင်း မေးမြန်းလို့ရပါတယ် . ကဲ အဆင်ပြေနိုင်ပါစေဗျာ ..
G-Talk ကို skin လှလှလေးနဲံသုံးချင်ရင်
kokophone on Wed Feb 24, 2010 1:58 pm
G-talk ကို skin လှလှလေးနဲ့သုံးချင်သူများအတွက်ပါ